मास्क लगाउनुहुन्छ ? लामो समय मास्क लगाउदा देखिन्छ ज्यान नै जानेसक्ने ४ खतरा ! – Hamrosandesh.com
मास्क लगाउनुहुन्छ ? लामो समय मास्क लगाउदा देखिन्छ ज्यान नै जानेसक्ने ४ खतरा !
कोरोनाको महामारीले मानिसहरु संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्दछन् । तर कतिपय अवस्थामा त्यहि मास्कले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ ।यदि तपाई पनि मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ रु लामो समय सम्मप्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान १ यसले तपाईको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।